यसरि पक्रनु पर्छ सर्प भनेर सिकाउन खोज्दा उल्टै सर्पले टोकेपछि… (भिडीयो हेर्नुहोस्)
July 11, 2020 5479
सर्प संरक्षक प्रेम बि’ष्टले सर्प पालन सुरु ‘गरेका छन । बन कार्यलयमा काम गर्ने प्रेमले विभिन्न ठाउँमा गएर घर घरबाट सर्प समातेर ल्याउने गरेका छन । सर्प समात्न सि’पालु प्रेम बिष्टले सर्प’लाइ असाध्यै माया गरेर पाल्छन ।
अब भने सर्प पालन नै सुरु गरेका छन । सर्पको टोका’इबाट मान्छेलाई बचाउन चाहिने औसधि सर्प’कै बीस र घोडाको रगत’बाट तयार गरुने भएकाले अब फारम नै खोल्न तया’री हुँदै गरेको प्रेम बिष्टले जानकारी दिए ।
धेरै पहिलादेखि नै सर्पलाइ माया गर्दै आएका प्रेमले करिब ५/६ हजार भन्दा धेरै चाहिँ बि’षालु सर्प समातिसकेका छन र बीस बिनाका सर्प त गनेर साध्य नै नभ’एको बताउछन । उनले कसैको घर’मा सर्प आएर कसैलाई क्ष’ती पुर्याउन आट्यो भने गएर समाउछन ।
र त्यो सर्पलाई पनि सुरक्षा हुने र मानब’लाइ पनि क्ष’ती नहुने कतै जङ्गल अथवा सुरक्षित ठाउमा पुर्याउछन । अब भने सर्प पालन गरेर नेपाललाई केही राम्रो गर्ने यो’जना बनाउदै गरेको र यसमा सरका’रको पनि साथको आवस्यक रहेको ब’ताउछन ।
आजको यो भिडियोमा प्रेम बिष्टले ‘कुन सर्पको बिष लाग्छ, कुनको लाग्दैन ?’ भन्ने बारेमा जानकारी दिएका छन् । जान’कारी लिनका लागी भिडियो हेर्नुहोला….
Prevप्रमोसन भएपछि खुसी भएका गुरुङ्ग दशैँमा आउँछु है भन्दै डिउटी गएका थिए !
खुशीको खबर – कोरियामा अब नेपाली विद्यार्थीले पनि इ– ९ भिषा पाउने
आफ्नो गाउँ छोडेर अचा’नक रुँदै काठमाडौ फर्किइन् सोनिका रोकाया (भिडियो हेर्नुस्)
फुल टिप्न खोज्दा गएको रहेछ पाइलटको ज्यान, घटना देखने प्रत्यक्षदर्शी यसो भन्छन् (भिडियोसहित)